Te-hanitsy horonan-tsary amin'ny Windows Story Remix | koa i Microsoft Vaovao momba ny gadget
Te-hanitsy horonan-tsary koa i Microsoft, ny Windows Story Remix no solony
Manohy ny vaovaon'i Microsoft Build izahay, ny hetsika asehon'ny orinasa Redmond ny sasany amin'ny vaovao eo amin'ny haavon'ny lozisialy izay hiaraka amin'ny rafitra fiasa malaza indrindra eo amin'ny tsena. Tamin'ity indray mitoraka ity dia hitantsika ny fidiran'ny orinasa amin'ny fanolorana ireo tonian-dahatsary tsotra sy haingana izay mamela anay hanao dingana voalohany amin'ny fanontana ary hizara ny valiny mora foana, ohatra, Apple nampiditra Clips ho an'ny iOS volana vitsivitsy lasa izay. Ankehitriny dia i Microsoft no mamaly ny valiny Windows Story Remix, ilay mpandimby mendrika ny Windows Movie Maker tonga feno fahagagana, te hahafantatra izany ianao?
Io, ny teboka matanjaka voalohany tokony hananantsika ny Windows Story Remix amin'ny sehatra telo samihafa, Windows, Android ary iOS. Eny tokoa, Windows dia nanary ny tenany tao amin'ny fantson'ireo mpanonta horonantsary ary hifaninana mivantana amin'i Clips, miaraka amin'ireo faningana vitsivitsy, ary izany dia Windows Story Remix dia mampiasa algorithma fianarana milina (Faharanitan-tsaina artifisialy?) Amin'izay izy io dia hampidirina ao amin'ny rafitry ny rakitrao sary sy horonan-tsary miaraka amin'ny fikasana hanovana azy ireo araka izay tratra, raha fintinina dia ilaina ny tsy manana fahalalana kely amin'ny fanovana, na dia kely aza ny fahatsapana tsiro, Hanampy horonan-tsary amin'ny fomba fanampiana fotsiny izahay.
Ity fanontana ity dia ho tonga amin'ny kinova sasany an'ny Windows 10, na izany aza, tsy mbola nifampiresaka tsara izy ireo hoe rahoviana no hahatratra ny ambiny amin'ireo sehatra. Ity dia iray amin'ireo zavatra tsy nampoizina lehibe tamin'ny Windows Build 2017 somary voadalana. Etsy ankilany, ny antony iray mamaritra koa dia hanana andiana tranomboky loharanom-pahalalana noforonina noforonin'ireo mpampiasa azo zaraina, mba hanampiana "effets spécial" ny horonantsarinay sy maro hafa. Vanim-potoanan'ny faharanitan-tsaina artifisialy, fantatr'i Microsoft izany ary te-hialoha mialoha ny fifaninanana toa ny Google Photos.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Te-hanitsy horonan-tsary koa i Microsoft, ny Windows Story Remix no solony
Presentation Translator no mpandika teny PPT amin'ny fotoana tena natolotr'i Windows
Microsoft dia manambara fa ho avy tsy ho ela ao amin'ny magazay Windows ny iTunes